Full HD Video Player Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » productivity Apps ကပ » Full HD ကိုဗီဒီယို player
Full HD ကိုဗီဒီယို Player ကို APK ကို
Full HD Video Player - HD Video Player - 4K Video Player - ၂၀၂၀ ဖြစ်သည် ဗီဒီယို နှင့် audio ကစားသူ မီဒီယာပုံစံများအားလုံးဖွင့်သည်။ ဒါဟာဆွဲဆောင်မှုရိုးရှင်းသည် အလင်းအလေးချိန်ချောမွေ့ပြီးအံ့သြလောက်အောင်မြန်သည်
၎င်းသည်အမျိုးအစားအားလုံးကိုထောက်ပံ့သည် ဗီဒီယို နှင့် audio ပုံစံများ။
၎င်းနှစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့ရန်ပြုလုပ်ထားသည် ဗီဒီယို နှင့် audio ပင်နောက်ခံ၌တည်၏။
ဖြစ်နိုင်ပါသည် 4K Video နှင့် Ultra high definition ဗီဒီယိုဖိုင်များကိုဖွင့်ပါ အလွယ်တကူဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်သင်၏ hardware ပေါ်တွင်မူတည်သည်။
●အသေးစားတပ်ဆင်မှုအရွယ်အစား ထက်နည်း 4MB.
●ဗီဒီယိုစာရင်းကိုချောချောမွေ့မွေ့ scroll လုပ်ပါ။
● မီဒီယာရှာပါ မြေတပြင်လုံးစက်ပစ္စည်း၏တိကျသော folder ထဲမှာ item ။
●ဗီဒီယိုချွေတာအမူအယာနှင့်အတူချုံ့ခြင်း / ချုံ့ခြင်း။
● အလင်း / အမှောင် Themes
● List + Grid မြင်ကွင်း
● အမူအရာထိန်းချုပ်မှုများ Volume, Brightness ကိုပြောင်းလဲရန်အတွက်မီဒီယာကိုချောချောမွေ့မွေ့ရှာဖွေပါ။
● မီဒီယာမျှဝေပါ လူမှုဖိုရမ်များပေါ်တွင်။
● HD ဗွီဒီယိုဖွင့်စက်။
● HD Video Player အရည်အသွေးမြင့် 1080p ။
● HD Video Player 2020 အသစ်။
● Full HD ဗီဒီယိုဖွင့်စက်ကိုသင် formats အားလုံးကစားနိုင်သည်။
● Full HD Video Player အရည်အသွေးမြင့် 1080p ။
● Full HD ဗီဒီယို Player ၂၀၂၀ ။
●အသုံးပြုသူအတွက်လွယ်ကူသော Video Player ဖြစ်သည်။
● android အတွက် Ultra HD 4K ဗီဒီယိုဖွင့်စက်။
● Ultra HD ဗီဒီယို Player 4K ။
● Ultra HD ဗီဒီယိုဖွင့်စက်။
● 4K ဗီဒီယိုဖွင့်စက်။
● android အတွက် 4K ဗီဒီယိုဖွင့်စက်။
● android အတွက် 4K ဗီဒီယိုဖွင့်စက်အမျိုးအစား။
● 4K ဗီဒီယိုဖွင့်စက် HD ။
● 4K HD ဗီဒီယိုသီချင်းဖွင့်စက်။
● 4K HD Video Player 2020 ။
● 4K ဗီဒီယိုဖွင့်စက်ကိုအခမဲ့ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ။
● HD အရည်အသွေးမြင့် HD
●เครื่องเล่น HD Full HD
●フル HD ビデオオプレーヤーー
●ဗီဒီယိုအပြည့်အစုံ Full HD
●ကစားနိုင် ဗီဒီယိုများ နှင့် Audio in နောက်ခံ.
●လုပ်နိုင်သည် 4K - Ultra HD ကိုဖွင့်ပါ - 2160p Videos ဟာ့ဒ်ဝဲပေါ်မူတည်။ ။
●လုပ်နိုင်သည် အားလုံးပုံစံများကိုကစား: AVI, MP3, WAV, MOV, MP4, WMV, 3GP, M4V, MKV, Rm, TS, MPG, FLV ရုပ်ပုံများ၊
Full HD Video Player သည်ပြီးပြည့်စုံသောမီဒီယာဖွင့်စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ကိရိယာတွင် HD ဗွီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်နှစ်ခုလုံးကိုဖွင့်နိုင်သည်။
နောက်ခံသမိုင်း Play စ
HD ဗီဒီယိုနှင့်အသံဖိုင်များကိုနောက်ခံတွင်ဖွင့်ပြီး Lock Screen တွင်ပင်အသိပေးခြင်းဖြင့်ထိန်းချုပ်ပါ။
Popup ၀ င်းဒိုးတွင် Ultra HD ဗီဒီယိုများကိုဖွင့ ်၍ အမူအယာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်များစွာဖြင့် multitasking ပြုလုပ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပါ။
Sleep Timer ကိုသတ်မှတ်ထားသောမိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ပြန်ဖွင့်ခြင်းကိုရပ်ပါ။
မီဒီယာဖိုင်များကိုအမြင်အမျိုးမျိုးဖြင့်ကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာအဆင်ပြေသည့်အတိုင်း List View + Grid View ။
ကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်များကို အခြေခံ၍ မီဒီယာဖိုင်များကိုစီစစ်ရန်ခွင့်ပြုသည် (ဥပမာ၊ အမည်၊ နေ့စသည်)
မီဒီယာများကိုကွဲပြားသော Modes များဖြင့်ဖွင့်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဥပမာတစ်ခုတည်းကစားခြင်း၊ တစ်ခုတည်းသောကစားခြင်းကစားခြင်း၊ အားလုံးကစားခြင်း၊
မှတ်စု: ဗီဒီယို 4K သင်၏ကိရိယာသည် 4K ဗွီဒီယိုများသို့မဟုတ်ကင်မရာကိုသာပံ့ပိုးမှသာ၎င်းစွမ်းဆောင်ချက်ကိုထုတ်ကုန်အားလုံးပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသည့် 4K ဗီဒီယိုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
Full HD ဗီဒီယို Player သည်လုံး ၀ ဖြစ်သည် အခမဲ့ android အတွက်အကောင်းဆုံး 4K Video Player၊ ရိုးရှင်း၊ မည်သည့်ဗီဒီယိုအမျိုးအစားကိုမဆိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ 4K Video Player သည်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးအတွက် All-in-one မီဒီယာဖွင့်စက်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
ပယ်ဖျက်ရန်: Full HD ဗီဒီယို Player သည် တရားဝင် android application ကို android's MediaPlayer Api ကို အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဖန်သားပြင်အချို့သည်မှဖြစ်သည် Big Buck Bunny Creative Commons Attribution 3.0 အရလိုင်စင်ရသည်
* UI / UX တိုးတက်မှုများ